ဘောလုံးဘုရင်ပီလီ၏ အူမအကျိတ်ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင် ၊ ဆေးရုံ၌ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ - Xinhua News Agency
ဆာအိုပေါ်လို ၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဘရာဇီးဂန္တဝင်ဘောလုံးသမား ပီလီသည် ၎င်း၏ အူမကြီးအတွင်းရှိ အကျိတ်ဖုအား ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးနောက် ဆေးရုံတွင် ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၈၀ နှစ်အရွယ်ရှိ ပီလီသည် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တွင် ဆက်လက်နေထိုင်နေရသော်လည်း စက်တင်ဘာ ၇ ရက်တွင် အထွေထွေကုသဆောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသမှုခံယူရန် မျှော်လင့်ရကြောင်း ဆာအိုပေါ်လိုမြို့ရှိ အယ်လ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းဆေးရုံမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“ ညာဘက်အူမကြီးက အကျိတ်လုံးကြီးကို ဖယ်ရှားဖို့ စနေနေ့နှောင်းပိုင်းက ခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ပါတယ်” ဟု ပီလီက လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ “ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က လုပ်တဲ့ ဆေးစစ်မှုမှာ အဲဒီအကျိတ်ကို စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ”
“ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူ အောင်ပွဲအကြီးအကျယ်ခံဖို့ ကျွန်တော်ပြန်ကောင်းလာပါပြီ ၊ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျနော်ဟာ အကောင်းရှုမြင်မှုများစွာနဲ့ အပြုံးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာပါ ။ ကျနော့်မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေလွှမ်းခြုံပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရပါတယ် ” ဟု ပီလီက ဆိုသည်။
ဆေးရုံက ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ခွဲထုတ်လိုက်သောအကျိတ်လုံးအား စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ရောဂါဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးထံ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ပီလီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က တင်ပါးဆုံရိုးခွဲစိတ်အစားထိုးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးချိန်ကတည်းက အများပြည်သူရှေ့မှောက်သို့ ထွက်ပေါ်ခြင်း အလွန်ရှားပါးခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ဖလား သုံးကြိမ်ဆုရှင် ပီလီသည် ဆီးကျိတ် နှင့် ကျောက်ကပ်ပြဿနာများကြောင့် ဆေးရုံတွင် မကြာခဏ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရသည်။
ပြီးခဲ့သော နှစ်တွင် ပီလီ၏ သားဖြစ်သူ Edinho က ပြောကြားရာ၌ သူ၏ ဖခင်သည် “ စိတ်ကျခြင်းကဲ့သို့သော ဝေဒနာဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း” အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်း၏ ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းခြင်း နှင့် အလွယ်တကူလှုပ်ရှားမသွားလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ပီလီသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမားဘဝတစ်လျှောက် ၂၁ နှစ်တာကာလအတွင်း ပြိုင်ပွဲစုံ ၁,၃၆၃ ပွဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး သွင်းဂိုးစုစုပေါင်း ၁,၂၈၁ ဂိုး ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ဘရာဇီးအသင်းအတွက် ၉၁ ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာသွင်းဂို ၇၇ ဂိုးရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
SAO PAULO, Sept.6(Xinhua) — Brazilian football legend Pele is recovering in hospital after undergoing surgery to removeatumor from his colon.
The 80-year-old remains in intensive care but is expected to be moved toageneral ward on Tuesday, according to medical staff at the Albert Einstein hospital in Sao Paulo.
“Last Saturday I underwent surgery to removeasuspicious lesion in the right colon,” Pele wrote inasocial media post. “The tumor was identified during the tests I mentioned last week.
A statement issued by the hospital said the tumor tissue had been sent toapathologist for tests.
Pele has rarely been seen in public since undergoing hip replacement surgery in 2012.
The three-time World Cup winner has since battledaseries of prostate and kidney problems that have often required treatment in hospital.
Last year, Pele’s son Edinho said his father was battlinga“kind of depression” because of his fragile health and mobility issues.
Pele scoredaworld record tally of 1,281 goals ina1,363-match professional career that spanned 21 years. He was capped 91 times for Brazil and scored 77 international goals. Enditem